NetBeans12.4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
NetBeans12.4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Mazuva mashoma apfuura iyo Apache Software Foundation Sangano rakaburitsa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni ye NetBeans 12.4 uye mune iyi vhezheni nyowani inosimbisa kuisirwa rutsigiro rweJava SE 16, pamwe nezvakakodzera kugadzirisa kugadzirisa rutsigiro rwePHP 8 uye nezvimwe.
1 NetBeans 12.4 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa NetBeans 12.4 paLinux?
NetBeans 12.4 Main Zvitsva Zvimiro
Mune iyi vhezheni itsva yeNetBeans 12.4, akawedzera rutsigiro rwe Java Java 16 chikuva.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo akawedzera wizard yekugadzira mapurojekiti anoenderana neiyo Micronaut fomati, pamwe nekuitwa kwekodhi kupedzisa, kugadzirisazve, nekubatanidza kubata muMicronaut yaml mafaera.
Zvezvirongwa zvinoshandisa iyo kuvaka system Maven, kugona kutsiva nharo mumaapplication uye michina chaiyo yakaitwa kushandiswa panguva yekutanga uye kugadzirisa dambudziko.
Panguva ye Gradle, zvinotaurwa kuti yakagadziridzwa kuita vhezheni 7.0, pamwe nerutsigiro rwakawedzerwa pakurongeka kunonzwisisika kwekodhi uye zviwanikwa ("Gradle Source Mapoka").
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo PHP maturusi ekuvandudza awedzera rutsigiro rwemazita anopokana, yakaunzwa mushanduro PHP 8.0. Iyo PHP-CS-Fixer 3 yekumisikidza mafaira akanyorwa mune akakosha mafaera chikamu.Akawedzera rutsigiro rwePhing 3. Iyo "Gadzirisa Unoshandisa" dialog yashandurwa.
Yakagadziridzwa vhezheni JaCoCo 0.8.6 (Gradle kodhi kufukidza).
Wakawedzera rutsigiro rwemaFreeform Ant mapurojekiti ane nesting level 9+. Yakagadziridzwa rutsigiro rwekusimudzira Java / Jakarta EE mapurojekiti uchishandisa Ant.
Kuvandudzwa kwekugadziriswa kwemategi eHTML anoshandiswa muwebhu fomu fomu.
Kuzivikanwa kwe ".md" mafaira ekuwedzera neMarkdown markup yakaitwa uye yakamisikidzwa neakakosha icon. Markdown syntax inosimbisa yakawedzerwa.
Kuratidzwa kusingaperi kwemashoko nezve kuvapo kwekukanganisa kunopihwa nenzira yepikogiramu mukona yezasi yekurudyi.
Maitiro ekuisa nekunyoresa kugoverwa kweOpenJDK muNetBeans akagadzirwa (chinhu "OpenJDK Universal Remote Service" chawedzerwa kune "Zvishandiso / Java Platform / Wedzera Platform" menyu).
Yakawedzera rutsigiro rweJakarta EE mapurojekiti 9.
Maitiro ekuisa NetBeans 12.4 paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » NetBeans12.4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Archinstall 2.2.0 inouya nemamwe profiles, kugona kuchinja kernel parameter uye zvimwe
Microsoft OpenJDK vhezheni yave kuwanikwa